Wakhuthazwa uyise osenepulazi likamoba
UNKK Nonhlanhla Gumede-Shabalala ongumnikazi wepulazi elikhiqiza umoba iThandimvelo uthi akhona amathuba avulelwe abesifazane kwezolimo Isithombe: Sithunyelwe
UKUSEBENZA noyise kwezolimo kuholele ekutheni naye agcine esengumlimi ovelele otshala umoba.
UNkk Nonhlanhla Gumede-Shabalala ongumnikazi wepulazi likamoba iThandimvelo eliseMtubatuba, oneminyaka eyisishiyagalolunye elima, uthe uyise wathenga ipulazi ngesikhathi efunda u-matric.
Wayesebenza naye emsiza wagcina esenothando lwezolimo.
“Ubaba sekuphele iminyaka engaphezulu kuka-40 engumlimi. Ngesikhathi ngifunda u-matric wathenga umhlaba ongamahektha angu-90. Kulapho nami ngaqala khona ukumsiza,” kusho yena.
Uthe ngemva kokuphothula u-matric wafundela umkhakha wamabhange wasebenza washiya kuwo ngo-2010 wabuya wazosebenza noyise.
Ngo-2017 uthe wathenga ipulazi elingamahektha angu-170.
Indawo akwazi ukuyilima epulazini ingamahektha angu-112, enye ingxenye iyihlathi.
Umoba otshalwa epulazini uthe uwudayisela abakwaTongaat Hullet. Ngaphandle komoba ubuye atshale nemifino ayidayisele izitolo aphinde aphakele nezikole ngemikhiqizo yezolimo kanti ufuye neziklabhu.
“Umoba kuthatha izinyanga eziyisishiyagalolunye ngaphambi kokuthi uvunwe. Ngaleso sikhathi ngisuke ngimatasa neminye iminxa yebhizinisi lezolimo okungukutshala imifino nokufuya iziklabhu. Angibi naso isikhathi sokuhlala ngilinde ukuthi umoba uvunwe,” kusho yena.
Uthe epulazini iThandimvelo uqashe abasebenzi abangu-10 ngokugcwele kanti ngesikhathi sokuvuna uqasha abanye abasebenzi betoho.
“Ngilifunde ngokushesha ibhizinisi lezolimo. Kwakuphoqa ukuthi ngibe nesu elicacile lokuthi ngizoyenza kanjani imali ngoba phela ibhange beliyifuna imali yalo. Bekumele ngenze isiqiniseko sokuthi ngiyayikhokhela i-bond njalo. Kube kusadingeka ngikhokhele omanyolo nabasebenzi. Ngike ngaba nezingqinamba zokukhokhela abasebenzi kwadingeka ngifunde ngokushesha ngoba bengingafuni ukulahlekelwa wumhlaba ebese ngiwuthengile,” kusho yena.
Ngo-2019/2020 abakwaTongaat Hullet’s bathatha isinqumo sokuthi bangabe besazilimela umoba kodwa bathenge umoba kubalimi abasathuthuka okwaholela ekutheni uNkk Gumede-Shabala nabanye basungule uZinzo Sugar Farming.
Abangamalungu oZinzo bakwazi ukuthola umhlaba ongamahektha angu-3 900 abawuqashile abalima kuwo umoba. Ngesikhathi sokuvuna bakhiqiza amathani angu-160 000 kamoba abawudayisela abakwaTongaat Hullet’s.
“UZinzo lwenze ukuthi ngikhule ebhizinisini lezolimi futhi ngifunde kozakwethu esisungule nabo le nkampani. Ngiyilungu lebhodi lale nkampani nomnikazi wamasheya kanjalo nomsebenzi ngakho bekumele ngifunde ngokushesha ukuze ngazi ngemithetho elawula izinkampani ezinjengalezi. Ngifunde nokuthi uma kunemihlangano nami kumele ngibeke umbono ophusile okhombisa ukuthi ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Ngafunda nokuthi uma ungumholi yini okumele uyenze,” kusho yena.
Uthe bekufanele akufunde ngokushesha lokhu ngoba umsebenzi wakhe wukuthi aqhamuke namasu amasha ebhizinisi. Asize nasekusebenzeni kwebhizinisi okuhlanganisa umsebenzi wasehhovisi.
“Uma ungumuntu wesifazane akhona amathuba kwezolimo. Kukhona noxhaso lukahulumeni olusiza abesifazane. Ebhizinisini kumele wazi ukuthi kungenzeka uwine noma ulahlekelwe,” kusho yena.